Wasiirka arrimaha gudaha oo faray Hey’adaha amaanka inay baaraan sababta degmo gaar ah loogu dilo Wariyaasha Shabelle – idalenews.com
Wasiirka Arrimaha gudaha iyo amniga qaranka C/kariin Xuseen Guuleed ayaa ku amray hey’adaha amaanka iyo taliyaasha ciidamada inay baaritaan ku sameeyaan sababaha loo dilo wariyeyaasha ka howl gala Idaacada Shabelle.
Shalay ayay aheyd markii rag hubeysan ay ku dileen degmada Wadajir Cabdi Xareed Cismaan Aadan oo ka mid ahaa wariyeyaasha Idaacada Shabelle, kaasoo noqday wariyihii ugu horeeyay ee sanadkan cusub lagu dilo Muqdisho.
Wasiirka Amniga ayaa saddex arrimood u jeediyay ciidamada inay soo baaraan, isagoo ugu horeyn tilmaamay sababaha loo dilo wariyeyaasha iyo bartilmaameedsiga gaarka ah ee lagu haayo wariyeyaasha Shabelle.
“Ugu horeyn waa inay soo baaraan sababaha loo dilo Wariyeyaasha, mida labaad Wariyaasha Shabelle sababta loo dilo, iyo sababta sida gaarka ah mid ka mid ah degmooyinka loogu dilo Wariyaasha Shabelle, oo aan loo dileyn wariyeyaasha idaacadaha kale ee gaarka ah”ayuu yiri Wasiirka Arrimaha gudaha.
Agaasimaha Idaacada Shabelle Cabdi Cuud ayaa sheegay in Marxuum Cabdi Xareed ay horay kaga digeen degenaanshaha degmada Wadajir, isla markaana ay talo ku siiyeen inuu ka soo guuro, hase ahaatee ay tiisa ku gashay.
Degmada Wadajir ayaa ah halka ugu badan ee wariyeyaasha lagu beegsaday sanadkii hore, iyadoo ilaa saddex wariye looga dilay Shabelle, halka wariye kale uu ku sigtay in lagu dilo, waxaana degmada kale ee Dharkeenley ee deriska la ah iyana bishii May lagu dilay Axmed Caddow Canshuur oo ka mid ahaa barnaamij soo saarayaasha Idaacada Shabelle.
Mar la weydiiyay Agaasimaha Shabelle Cabdi Cuud sababaha loo beegsado ayuu sheegay in Idaacada Shabelle ay xaqiiqda ka hadasho, isla markaana ay taas u sababeynayaan in loo dilo wariyeyaasheeda.
Idaacada Shabelle ayaa ka mid ah idaacadaha ugu waa weyn ee ka howl gala magaalada Muqdisho, iyadoo horay looga dilay Mas’uuliyiin iyo wariyeyaal u shaqeynayay oo lagu kala dilay Muqdisho iyo qaar ka mid ah gobolada dalka.